हामी जे खाँदैनौँ त्यसैले मृत्यु निम्त्याइरहेछ | Ratopati
personएजेन्सी exploreकाठमाडौं access_timeचैत २१, २०७५ chat_bubble_outline0
सिएनएन । संसारभरी जतिको मृत्यु हुन्छ, त्यसका लागि मुख्य कारण के होला ? धेरैले धुम्रपान भन्नुहोला, कसैले उच्च रक्तचाप पनि भन्नुहोला । तर होइन ।
संसारभर धेरैले ज्यान गुमाउने मुख्य कारण हो, कमजोर खान्की ।
‘धेरैजसो देशमा धुम्रपान र उच्च रक्तचापले होइन, कमजोर खान्कीले मानिसको ज्यान लिइरहेको छ,’ युनिभर्सिटी अफ वासिङ्टनको इन्सिटिच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एण्ड इभ्यालुएशनका सह–प्राध्यापक आस्कान आफ्सीनले भने ।
नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङ्गका विद्यार्थीले गरे रक्तदान
बाथरोग के हो ? कसरी बच्ने ?
प्रोटिनको कमी हुन नदिन शाकाहारीले खानुपर्छ यी १० खानेकुरा
पेट बढेर हैरान हुनुहन्छ ? यी १२ तरिकाले सजिलै घटाउनुहोस्
इ–कमर्शले सङ्कटमा सपिङ मल
अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट स्यान्डर्स अगाडि